Soo degso Avro Lancaster TP464 DB AJJ v6 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 22 133
pack waxa ku jira diyaaradaha iyo duulimaadka qorshaha loogu talo galay inay u sheegaan sheekada ka mid ah weerar 617 Qiimeynta RAF Dambuster ku Moehne iyo Ceeder xireenno 16 - 17th May 1943.
Waxaad ka heli doontaa qorshooyinka duulimaadka qeybta bilowga - Dhamaan Barnaamijyada - Rikoooo Add-ons - Avro Lancaster TP464 DB AJC v6 FSX & P3D - FlightSimulatorFiles
Avro Lancaster waxa uu ahaa ismiidaamin ah afar-engined ee dagaalkii labaad ee adduunka, marka hore soo saaray Avro for Air Force Royal. adeegga galay in 1942, waxaa la dhisay ka badan koobi 7000 iyo Page Handley ku Halifax, qarxiyay ugu weyn ee Air Force Royal ee xilligaas jiray. Waxay caan qaraxii habeen ay.
Word ka qoraaga:
Tani waxay sii daayo sida arrimaha hore waxaa loogu talagalay inay u sheegaan sheekada ka mid ah weerar 617 Sqd Dambuster on xireenno Ruhr ee Germany 16-17 May 1943. Waxa ay tani iyada oo duulimaadyo bixiyo iyo via diyaaradaha oo aad u awood Dambuster Lancaster ka Diyaarad-Design. In version this wadada ay u xireen oo waa badan oo sax ah, sababtoo ah waxaa jira
faahfaahin dheeraad ah oo lagu daabacay buugaag iyo web ka badan waxaa dib u 2003 ahaa. Waxaa weli jira isku dhacyada macluumaadka la daabacay. Waxay ku xiran tahay oo asal waxaad ka akhrisan oo isticmaalaan.
Waxa hubaal ah haddii aad duusha oo jidka shaqaalaha dib ugu sameeyey 1943 waxaad yeelan doontaa faham ballaadhan oo ka mid ah oo keliya sida ay u adag tahay shaqada ahaa.
Iyadoo fadhiistay kursiga Duuliyayaasha ee "Just Jane" ee UK oo loo isticmaalo kontaroolada waxaan leeyihiin waxgarasho wanaagsan ee Lancaster oo aan booqashada ku Dam Eder ee faham dhab ah dhul ay duulay badan ka dib.
The xirfadaha Cajiib ah shaqaalaha lama si sax ah Yururb karaa Qabille, laakiin waa inaad hubaal ka Project this la timid aragti fog fiican waxa ereyga "Dambuster" waxaa loola jeedaa iyo sida wax ku ool ah Lancaster ahaa aalad loo isticmaalo in la gaarsiiyo natiijada guul .